कस्तो बन्छ त रानीपोखरी ? | Sagarmatha TVSagarmatha TV कस्तो बन्छ त रानीपोखरी ? | Sagarmatha TV
कस्तो बन्छ त रानीपोखरी ?
शान्ता दनुवार । २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा ध्वस्त सांस्कृतिक धरोहर रानीपोखरी पुनः निमार्ण थप अनिश्चित् बनेको छ । रानीपोखीको स्वामित्व काठमाडौ महानगरपालिकासंग रहेपनि भुकम्प गएको करिव ४ बर्षसम्म यसको पुर्ननिर्माण हुन सकेको छैन ।
जिम्मेवार निकायका बीच मै बिवाद चर्किएपछि ऐतीहांसीक महत्वको रानीपोखरी पुननिर्माण अन्ततः राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणले नै रानीपोखरी बनाउने भएको छ । त्यसोत, रानीपोखरी काठमाडौं महानगरपालीकाले आफ्नो गौरव गर्न लायकको सम्पदाको रुपमा सुचिकृत क्षेत्र ।
जुन बिगत ३ बर्षदेखि खण्डहरका रुपमा अस्तव्यस्त छ । मल्लकालीन इतिहाससंग जोडीएको यो पोखरी सुरुमा काठमाडौं महानगरपालीकाले बनाउने भन्दै २०७२ माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको हातबाट शिलान्यास गराएको थियो ।
तर, यो तीन वर्षको अवधीमा रानीपोखी झनै खण्डहर बनेर मासिने अवस्थामा पुगेको छ । यो महानगरले ऐतीहांसीक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न नसक्नुको परिणाम हो ।
जसलाई महानगरले आधुनीक निमार्ण सामाग्री हालेर बनाउने प्रयास सम्म ग¥यो । तर सम्पदा संरक्षण अभियन्ता देखि पुरातत्व विभागसम्मले विरोध जनाएपछि रानीपोखरी बन्न सकेन ।
यही अल्झन र बिबादका बीच सरकारले अब पुरानो ठेक्का सम्झौता रद्ध गरेर यसको पुनर्निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको छ । रानीपोखरीको मध्य भागमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर अब प्राधिकरणले अहिलेसम्मको अनुभव, सुझाव र विज्ञहरुको निगरानीमा परम्परागत् शैली र स्वरुप मै बनाउने छ ।
जसले साढे ३ बर्षसम्म रानीपोखरी पुनर्निर्माणको राजनीति ग¥यो अहिले त्यही निकाए काठमाडौ महानगरपालीका भने सरकारको निर्णय प्रति आपत्ति जनाई रहेको छ । महानगरपालीकाको आपत्ति र असहयोग कायम रहेपनि अब रानीपोखरी मल्लकालिन शैलीमै निर्माण हुने छ ।
पुर्ननिमार्ण प्राधिकरणले यसको मौलीकता कायम राख्दै, भुकम्प प्रतिरोधी संरचना तयार पार्ने बिषयमा आवाश्यक छलफल र अध्ययन थालीसकेको छ । आशा गरौं रानीपोखरी अब राजनीति गर्ने थलो बन्ने छैन ।